Ra'iisul Wasaare Rooble oo ka hadlay doorashada, amniga, siyaasadda dibada iyo arrimo kale – Puntland Post
Posted on January 13, 2022 January 13, 2022 by Desk
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlay doorashada, amniga, siyaasadda dibada iyo arrimo kale
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta guddoomiyay Shirka Toddobaadlaha ah ee Golaha Wasiirrada, ayaa uga warbixiyay heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran, amniga dalka iyo siyaasadda arrimaha dibada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda iyo dhammaan dhinacyada ay ka go’an tahay in ay doorashadu ku dhammaato xilligii lagu heshiiyay.
Isagoo ka hadlayay amniga dalka, ayuu Ra’iisul Wasaare Rooble faray hay’adaha amnigu in ay xoogga saaraan sugidda ammaanka dalka, isagoo faray laamaha amnigu in aysan ku milmin siyaasadda, xooggoodana isugu geeyaan la dagaallanka argagixisada.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku dhaqmeyso siyaasad arrimo dibadeed oo ku saleysan halka ay ku jirto maslaxadda Ummadda Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in aysan suurto gal ahayn in Soomaaliya ay colaadiso dalal ay kala dhexeeyaan dano badan.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaaraha ayaa faray wasiirrada iyo madaxda kale ee hay’adaha xukuumaddu in aysan ku tagri falin awoodda iyo hantida qaranka xilligan kala guurka ah.
Hoos ka daawo muuqaalka Ra’iisul Wasaare Rooble
Xasan Sheekh Maxamuud oo markale loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya
Madaxweyne Xasan Shiikh oo sheegay in aysan jiri doonin wax aargoosi siyaasadeed ah
Natiijada wareegga labaad ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya